DIGNIIN KU ABBAARAN MAAMULKA DAWLADDA MAREYKANKA - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
DIGNIIN KU ABBAARAN MAAMULKA DAWLADDA MAREYKANKA
Publicerat fredag 30 juni 2006 kl 10.40
Madaxa ururka xagjirka ee Al-qaacida Usama ayaa ammaan u jeediyey Abu Musab Al-Zarqaawi oo ururka uga wakiilka ahaa dalka Ciraaq dhowaantanna ey ciidamada Mareykanku ku dileen dalkaasi.
Sidoo kale wuxuu Usama Bin-ladin hanjabaad la beegsadey dalka Mareykanka, sida ku caddeyd cajalad maalintii jimcaha lagu baahiyey aaladda Internet-ka.
- Libaaxii dagaalka xaqa ah ee Abu Musab Al-Zarqaawi ee ku geeriyoodey weerar ey ciidamada Mareykanku qaadeen. Waxaan alle ka rajeyneynaa inuu u garawsado mujaahid. Sida ku duubneyd cajaladdaa laguna sheegey inuu ahaa Usama Bin-Ladin.
Bin-Ladin wuxuu kaloo cajilkaa ku sheegey in uu halkiisii ka sii socon doono dagaalka uu Mareykanku kula jiro.
- Doonidda rabbi daraadeed ayaan jihaadkii halkiisii ka sii wadi doonnaa.
Ciraaq, Afgaanistaan, Soomaaliya iyo Suudaan-ba illaa aan dhaqaalihiina oo dhan ka gubno, raggiinanna ku leyno. Islamarkaana aad dalkiinii ku noqon doontaan idinka oo guuldarreystey. Sidii aan horreyba idiinka guuleysaney Soomaaliya, ayuu sheegey codka ku duubnaa cajilkaa.
Codkii cajilkaa ayey baaritaan ku heysaa heyadda sirta ee Mareykanku. Iyada oo illaa haddana wararka ka soo baxey sheegayaan inaan shaki laga qabin cidda hadleysaa.
Taasina oo macnaheedu tahey in hogaamiyaha ururka Al-Qaacida Usama Bin-Ladin uu markii afaraad sannadkan gudihiisa hanjabaad noocaasiya sii daayo.